I-China China Top Stream Factory Eyenziwe Ngesandla I-Wholesale Fashion Sunglasses ifektri nabakhiqizi |I-D&L
I-China Top Stream Factory Izibuko Zelanga Zemfashini Yesitolo Esenziwe Ngezandla
I-DLL9410 izibuko zelanga zefreyimu ezinkulu zemfashini, ezifaneleke kakhulu abesifazane ukuba bazigqoke, eziklanywe ngemibala ehlukene ukuze ube nokufanelana okuhle kokuhamba kwansuku zonke ngezinkathi ezahlukene zonyaka.Imboni ikhiqiza amanani amakhulu entengo yewholesale futhi ingenza ngezifiso amalogo nemibala ehlukene ngesikhathi esisodwa.
Uzimele oyisikwele ugcwalisa isilevu esincanyana, wengeze ama-engeli ahlukene futhi wengeza isendlalelo esibonakalayo.Gwema noma yini enkulu noma emise okwe-teardrop, futhi ufinyelele noma yini enamakhona abukhali.
Izibuko zelanga ezijwayelekile zendiza kunzima ukuzishaya endaweni yabashayeli noma emgwaqeni.
Kwenziwe e-Japan, lawa ma-shades ayingqayizivele afaka amafreyimu nama-lens angasindi, a-hypoallergenic kanye namalensi ane-anti-reflective coating.Lesi sitayela sihlanganisa amabhuloho embobo yokhiye endabuko alingana yonke imo yobuso, kanye nama-engeli angajwayelekile awenza ahluke.
Njengedayimane, lesi simo sobuso sibanzi phakathi - ngaphesheya kwezihlathi - kodwa sikhomba ebunzini nasesilevuni.
Izimo eziningi zozimele zizosebenza nobuso bedayimane, inqobo nje uma zilingana nezilinganiso zakho.Noma yini ebanzi kunama-cheekbones akho izokwenza ingxenye ebanzi yobuso bakho ibonakale yaba banzi (futhi, ngokulandelayo, yenza isilevu sakho nesiphongo kubonakale kukuncane kunalokho okuyikho ngempela) .
Kubantu abanobuso obunxantathu bobuso, ibunzi liyingxenye ebanzi kakhulu.Okusele kuholela esilevini, esikhonjwe futhi sigqanyiswe umhlathi we-angular.
Ozimele abengeziwe phezulu bangabangane bakho.Noma yini esesimweni se-teardrop izogcizelela ibhalansi kasayizi.Amafreyimu ayisikwele anamalensi ajulile alula futhi ayasebenza.
Lawa mafreyimu aqinile, aheha amehlo, enziwe ngesandla e-China, acishe abe yimifanekiso eqoshiwe.Ngebhuloho lembobo yokhiye kanye nokuma okugobile okuphefumulelwe kabusha, kokubili akuphelelwa yisikhathi futhi kwesimanje.
Yehlisa ukukhathala ngenxa yokulungiswa kwamehlo noma ukulimala okuvela ekuvuselelweni kokukhanya okukhanyayo
Amalensi anombala: aziwa nangokuthi "amalensi anombala", okungukuthi, ngesikhathi sokukhiqizwa kwamalensi, amanye amakhemikhali ayangezwa ukuze enze amalensi abonakale anombala ukuze amunce ukukhanya kobude obuthile.Lolu wuhlobo lwelensi oluvame ukusetshenziswa kakhulu lwezibuko zelanga ze-DL.
Khetha ohlwini olungcono kakhulu lomhlaba lwezibuko zelanga eziklanyelwe.
Amafreyimu aqondaniswe nethrendi.DL amathempeli esiginesha.isitayela sobuntu obuphezulu neqoqo le-sunnies Eyewear.
Izibuko zelanga ze-DL zihlanganisa idizayini yesimanje yase-Italy nekhwalithi ephezulu.Idizayinelwe abasebasha enhliziyweni, abasha, abathengi abanomqondo ovulekile, ihlanganisa ikhwalithi ephezulu nesitayela sesimanje.
Imininingwane mayelana nezibuko zelanga eziyisikwele
Amafreyimu anemininingwane ye-Jewel-Details Square Oversized Sunglasses Yabesifazane.Leli iqoqo lakamuva lango-2022 lezingubo zamehlo zabesifazane.Zibambele lokho kubukeka okusemfashinini nobuhle ngokugqoka umbala owuthandayo.
I-DL GLASSES Izibuko Zelanga Eziyisikwele Zabesifazane zifanele usayizi omaphakathi ezifanele cishe wonke umumo wobuso.
Inketho efanelekile yokushayela, hlanganyela nabangane, amaphathi, amabhishi, namaphathi okubhukuda.
I-UV 400 evikelwe, amalensi e-polycarbonate ekhwalithi enhle avikela ukuklwebha, avikela emisebeni yelanga eyingozi.
Ilogo kanye nombala ngendlela oyifisayo
Okwedlule: Isephulelo esithe xaxa I-China Manufacturer PC Frame Women Cat Eye Fashion Sunglasses
Olandelayo: Umkhiqizi waseShayina izibuko zelanga eziyisikwele eziyisikwele ku-tiger tort
Izibuko ze-Bat Shape Uhlaka Oluncane Lwemfashini
China ifektri fashion cat iso abesifazane izibuko